नेपाल मदर डट कम (www.NepalMother.com) - नेपाल बाहिर नेपालीहरुको सामुहिक आवाज : फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, स्न्याप चाट, वि च्याट, ह्वाटस्एपजस्ता विभिन्न प्रकारका सामाजिक सञ्जालमा झुम्मिनेहरु हो साबधान ! लागुऔषधको भन्दा सामाजिक सञ्जालको लत खतरा !
फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, स्न्याप चाट, वि च्याट, ह्वाटस्एपजस्ता विभिन्न प्रकारका सामाजिक सञ्जालमा झुम्मिनेहरु हो साबधान ! लागुऔषधको भन्दा सामाजिक सञ्जालको लत खतरा !
आजकल मानिसहरु फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, स्न्याप चाट, वि च्याट, ह्वाटस्एपजस्ता विभिन्न प्रकारका सामाजिक सञ्जालमा सक्रिय छन्। यी सञ्जालहरुले मानिसलार्इ व्यस्त बनाइराखेको छ। तर सामाजिक सञ्जालले मानिसहरुलार्इ मनोरञ्जन मात्र दिइरहेको छैन, यसले विभिन्न किसिमका समस्याहरु समेत निम्त्याइरहेको छ।
स्वाभाविकै हो सामाजिक सञ्जालमा सक्रिय रहँदा बारम्बार आफ्नो मिडिया एकाउण्ट चेक गरिरहन मन लाग्छ। म्यासेज,लाइक्स, रिप्लाइ वा कमेन्ट हेर्न वा अपलोड गर्न मन लाग्छ। आजकल बानी यस्तो परिसकेको छ कि केही
घण्टा वा केही दिनमात्र पनि आफ्नो एकाउण्ट चेक गर्ने मौका मिलेन भने हामीहरुलार्इ टेन्सन हुने गर्छ।
बिबिसी हिन्दी सेवाका अनुसार यस्तो टेन्सन हामीहरुलार्इ मात्र होइन विश्वभरका धेरै मानिसहरुलार्इ हुने गर्छ। यस्तै टेन्सन बढेर लत नै लागेकाले विश्वभर सोसल मिडियामा सक्रिय रहनुका नकारात्मक पक्षहरुलार्इ केलाउन थालिएको छ। बिबिसीको अनलाइन संस्करणका अनुसार विश्वभर नै सामाजिक सञ्जालको लत लागेका धेरै मानिसहरु छन् जसलार्इ आफ्नो एकाउण्ट केही समयका लागि चेक गर्न नपाएमा छटपटी हुने गर्छ।
एक्सपर्टहरु भन्छन् सामाजिक सञ्जालको लत पनि एक किसिमको रोग नै हो। यसको लत लागेका मानिसहरु अहिले यसबाट मुक्ति पाउको लागि एक्सपर्टहरुसँग परामर्शमा जाने गरेका छन्। एक्सपर्टहरुले सामाजिक सञ्जालको लत छुटाउने यस्तो प्रविधिलार्इ डिजिटल डिटक्स भनेका छन् अर्थात् डिजिटल विषबाट मुक्ति।
यो लत छुटाउनका लागि मानिसहरु विभिन्न तरिकाहरु अपनाइरहेका छन्। एक्सपर्टहरुले सामाजिक सञ्जालको लतको शिकारहरुको उपचार गरिरहेका छन्।
अमेरिकामा मनोवैज्ञानिकहरुले यसका लागि एक घण्टाको डेढ सय डलर अर्थात १५ हजार रुपैयाँ भन्दा बढी पैसा लिने गरेका छन्। लामो लामो सेसनकालगि एक घण्टाको पाँचसय डलरसम्म लिएर उनीहरु मानिसहरुको यो लत छुटाउनतिर लागेका छन्।
सामाजिक सञ्जालको यो लत यति खतरनाक छ कि एक्सपर्टहरुले यसलार्इ रक्सी वा लागुपदार्थकै लत भन्दा भयानक मान्न थालेका छन्। अमेरिकाको न्यूपोर्ट बिच शहरमा मनोबैज्ञानिक परामर्श तथा सेवा दिइरहेकी पामेला रटलेजका अनुसार उनी मानिसहरुलार्इ सामाजिक सञ्जालको लत कम गर्न विभिन्न कलाहरु सिकाएर ध्यान अन्त मोड्न सिकाउँछिन्। उनी मानिसहरुलार्इ पौडी, ड्राइभिङजस्ता काम सिकाउँछिन् तर मानिसहरु भने यी सबै छोडेर मोबाइल हेर्न थालिहाल्छन्।
अमेरिकाको ह्युस्टन शहरका थेरापिष्ट नाथन ड्रिस्केलका अनुसार पछिल्ला केही वर्षहरुमा सामाजिक सञ्जालको लत अन्य बिमारीभन्दा पनि तीब्र रुपमा बढिरहेको छ। उनीकहाँ यसबाट छुटकारा पाउन चाहनेहरुको लाम नै लाग्ने गरेको छ। अध्ययनका अनुसार यो लत वर्षेनी २० प्रतिशतका दरले बढिरहेको छ। यसबाट सामाजिक सञ्जालको लतले महामारीकै रुप लिने संकेतसमेत देखाएको छ।
नाथनका अनुसार पहिले मानिसहरु भिडियो र कम्प्यूटर गेमको लतबाट मुक्त हुन सल्लाह माग्न जाने गर्थे तर अहिले यो सिलसिला रोकिएको छ र सोसल मिडियाका शिकारहरु उनीकहाँ उपचार माग्न जाने गरेका छन्। नाथन सोसल मिडियाको लतलार्इ रोग नै त मान्दैनन् तर धेरै मनोविज्ञहरुले यसलार्इ दिमागी विरामीकै रुपमा उपचार गर्ने गरेका छन्।
नाथनका अनुसार फेसबुक, ट्विटर र स्न्यापच्याटले हाम्रो मानसिक शान्तिमा खलल पुर्याएको छ। यसको उपचार त्यति सजिलो छैन। उनी भन्छन्- ‘रक्सी र लागुपदार्थको लत बरु सजिलै छुट्ला सोसल मिडियाको लत त्यति सजिलै छुट्दैन। ’नाथनले एक घण्टाको १५० डलर लिएर उपचार गर्छन्। उनीले नियमित ६ महिनासम्म उपचार गरेपछिमात्रै मानिसहरुले यो रोगबाट छुटकारा पाउने गरेका छन्।
सोसल मिडियाको लत छुटाउनकालागि कुनै पनि तरिका छैन । आफैंले आफ्नो आदतमा नियन्त्रण गर्ने र बानीब्यहोरा परिवर्तन गर्नै पर्छ। स्मार्टफोनबाट केही दुरी नै राख्ने गर्नुपर्छ। यदि तपाइको लत ज्यादै नै छ भने विशेषज्ञको सहयोग समेत लिनुपर्ने हुन्छ। तपार्इको रोग निकै गम्भीर हुनुभन्दा पहिले नै आफूलार्इ नियन्त्रण गर्ने तर्फ लागौं। यो रोगलार्इ गम्भीर हुनुभन्दा पहिले नै पहिचान गरी आत्मनियन्त्रण गर्न सकिन्छ। विश्वभर नै चुनौतीका रुपमा देखिएको सोसल मिडियाको प्रयोगलार्इ लतका रुपमा होइन सीमित अवधिका लागि मात्र प्रयोग गरौं। - पहिलो पोस्ट
अब आउने शनिवार तपाईंलाई निम्तो छ नभुल्नुहोला नि !
समय:- बिहान 11 बजे
for further update and detail click
www.Nepalmother.copm or www.enepalse.com